अजय देवगन र काजोलले मुम्बईमा किने ६० करोडकाे आलिसान घर! | समाचार
May 31, 2021 May 31, 2021 NepstokLeaveaComment on अजय देवगन र काजोलले मुम्बईमा किने ६० करोडकाे आलिसान घर!
काठमाडौं । बलिउडका एक्शन अभिनेता अजय देवगनले मुम्बईमा नयाँ आलिसान घर किनेका छन् । जानकारी अनुसार अभिनेता अजयले मुम्बईको जुहुमा रहेको आफ्नो पुरानो घर (शिवशक्ति) नजिकै ६० करोड भारतीय रुपैयाँमा नयाँ घर खरिद गरेका हुन् ।
भारतको एक लोकप्रिय अखबरमा छापिएको समाचार अनुसार अभिनेता अजय देवगनका प्रवक्ताले यसबारे पुष्टि गरेका हुन्। हालसम्म अजय देवगनको नयाँ घरको मूल्य नखुलाएपनि रियल स्टेट विजनेससँग जोडिएका सुत्रका अनुसार उक्त घर ६० करोड भारुको प्रोपर्टी हो ।
पछिल्लो समय अजय देवगन र उनकी श्रीमती काजोल नया घरको खोजीमा छन्, भन्ने समाचार पनि बाहिरिएको थियो । त्यसोत, उनीहरुले वर्षको अन्त्यसम्ममा ५९० स्क्वायर यार्डमा फैलिएको उक्त नयाँ घर फाइनल गरेका छन् ।
योसँगै अब अभिनेता अजय देवगन र अभिनेत्री काजोलको नयाँ छिमेकीहरुमा अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, धर्मेन्द्र, अमिताभ बच्चनलगायत बलिउडका चर्चित कलाकारहरु हुनेछन् । बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनले पनि उक्त ठाउँमा भर्खरै नयाँ घर किनेका हुन् ।
पछिल्लो समय अभिनेता अजय देवगनको ‘तानाजीःद अनसङ.ग वारियर’ दर्शकमाझ रिलिजमा आएको थियो । उक्त फिल्मले विश्वभर करिब ३५० करोड भारुको कमाई गरेको थियो ।